Hurumende yeUnited States of America haina kufarira kudzikira kweIOS kana | IPhone nhau
Hurumende yeUnited States of America haina kufarira kudzikira kweIOS futi
Iyo nharo yakapihwa nguva refu yapfuura, muchokwadi inoramba iri nekuti MuIOS 11.3, ine beta yatiri kutoyedza, hatina kuwana humbowo hwechingava switch chinokanganisa kudzikira kweiyo iOS. kuti CEO wekambani, Tim Cook, akativimbisa.
Uku kudzikira kwemaune kwakatsamwisa masangano mazhinji evatengi uye kunyange hurumende. Nemavhiki mazhinji ekunonoka, zvinoita sekunge United States of America inosimbisa kusahadzika kwayo nezvesimba rekumisikidza magetsi eIOS. Isu tichazonzwa nezve kuferefetwa mumazuva mashoma anotevera.
Zvirinani izvo ndizvo zvavakaburitsa muBloomberg, vatinoshanda navo vekuNorth America vanopupura izvo chaizvo Hurumende yeUnited States of America yakanyatso kutanga kuferefeta musangano iri iro Apple rakaedza kutsanangura pane kanopfuura kamwe chiitiko asi izvo zvinoita sekunge hazviwani mhinduro imwe pakati pevanyanzvi nevashandisi. Ndiro Dhipatimendi Rezvechengetedzo neRuramisiro avo vakatanga kuda kutora matanho pamusoro penyaya iyi, kunyangwe ivo vasina kana kupa ruzivo rwepamutemo rwatingawana pfungwa yeudzame hwemishumo iyi uye kunyanya nezvezvinogona kutsiva.
Parizvino Bloomberg inoshuma kuti Hurumende yakabvunza Apple ruzivo rwechokwadi pamusoro pezvikonzero zvekukamurwa uku, uye pamusoro pezvese ruzivo nezvekuti vanozviita sei, sezvo vasingatendese mushandisi kubata mhando iyi yesarudzo pamusoro pechishandiso chavo, vari padyo nepedyo nemafungiro akatorwa neVolkswagen, iyo femu yeGerman pamwe nekubuda kwemota dzayo kutenderera pasirese . Ngazvive sezvazvingaite, isu tinogona kungoenderana nezvedungamire inotorwa nesarudzo idzi uye pamusoro pezvese kuramba tichiyedza iyo iOS betas kuti tione kana iro basa rinotibvumira kudzima chimiro ichi rinosvika pakupedzisira kana kwete. Kugadziridza kuchenjera, sezvavanotaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Hurumende yeUnited States of America haina kufarira kudzikira kweIOS futi
Facebook inoburitsa zvayo zvakavanzika zve7 uye inokupa iwe kudzora pane yako data
Iyo yakanakisa kota munhoroondo yeApple inosvika nekutenda kune iPhone X